Hack AirTags, soo bandhig MacBook Air iyo wax ka badan. Toddobaadka ugu fiican waxaan ka socdaa Mac | Waxaan ka socdaa mac
Hack AirTags, soo bandhig MacBook Air iyo wax ka badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Jordi Gimenez | | dhowr
Waxaa la filayaa in usbuuca soo socda ay jiri karaan warar ku saabsan Apple's AirPods three laakiin kaliya maahan AirPods, waxaa sidoo kale jira hadal ku saabsan suurtagalnimada in Apple Music ay ku darto tayada codka Hi-Fi. Laakiin hadda waxaan u jihaysaneynaa mustaqbalka si aan diirada u saarno qodobadii hore. Waana tii toddobaadkan aan helnay warar muhiim ah oo ku saabsan dunida Apple qaarna waxaan xasuusan doonnaa maanta oo axad ah dhamaantiin.
Midka koowaad ee warkan wuxuu ku saabsan yahay «jabsiga» AirTags-ka. Kani waa mid ka mid ah wararka soo jiidan kara dadka isticmaala laakiin mabda 'ahaan maahan inaan ka walwalno, waana ku saabsan tahay ilaa xad "khafiif ah" jabsad aan haba yaraatee ahayn wax cabsi leh.
MacBooks cusub ayaa sugaya in la soo saaro waxyar ka dib.
Toddobaadkan waxaa sidoo kale jiray a soo bandhigo waxa noqon kara MacBookga cusub ee sanadkan. Wanaagsan ee Jon Prosser, wuxuu mas'uul ka ahaa muujinta naqshadda suurtagalka ah ee Apple MacBook Air waxayna umuuqataa in ay aad ujecelyihiin inkasta oo ay run tahay oo aanaan wakhti kasta odhanayn waa naqshaddii ugu dambaysay.
Miyaad u malaynaysaa inay Apple bilaabi karto qalabka ciyaarta? Hagaag, waxay umuuqataa inay jiraan warar xan ah shirkadda Cupertino waxay diyaar u tahay inay soo bandhigto konsole ama ugu yaraan ay ka shaqeyneyso. Toddobaadkan waxaan aragnay warka.
Si aan u dhammeyno waxaan rabnaa inaan kula wadaagno dhammaan wararka ku saabsan dhibcaha ugu horreeya Geekbench oo ah 24-inch iMac oo leh processor M1 ah. Qaswade ahaan iyo haddii ay tahay kiiska horay uma aadan aqrin warka Waxaan kuu sheegi doonaa inay tahay dhibco sare.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Hack AirTags, soo bandhig MacBook Air iyo wax ka badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Maaskarada ayaa weli qasab ku ah Bakhaarrada Apple ee Mareykanka
IMac Pro Space Gray Accessories iibka inta alaabtu socoto